भगवान शिवसँग जोडिएका यी रहस्य तपाईँलाई थाहा छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
कालीको चरणमा शिव : भगवान शिव महादेव माता कालीको चरणमुनि पनि मुस्काइरहन्छन् । भगवान शिव क्रोध र उग्रताका प्रतीक हुन् तर उनै सबैभन्दा उदार रुपमा पनि प्रस्तुत हुन्छन् । आखिर किन यस्तो ? यसको पछाडिको कारण थाहा पाउनुस् ।
माता पार्वतीको परीक्षा : हामीमध्ये धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ भगवान् शिवले माता पार्वतीको पटक पटक परीक्षा लिएका थिए । पार्वती मातासँग विवाह गर्नु पहिले भगवान शिवले उनको परीक्षा लिने कुरा सोचे । भोलेले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर पार्वती नजिक पुगे । उनले पार्वती मातासँग भगवान शिव जस्तो केही नभएको भिखारीसँग किन विवाह गर्न लाग्यौ ? भनेर प्रश्न गरे ।
यसैले लगाउँछन् भष्म : भगवान शिव पूरै शरीरमा भस्म लगाउँछन् । शिवभक्त निधारमा भष्मको तिलक लगाउँछन् । शिव पुराणमा यसबारे निकै रोचक कथा पढ्न पाइन्छ । एक सन्त लगातार तपस्या गरेर धेरै शक्तिशाली भएका थिए । जसले केबल फलफूल र हरियो पात मात्रै खान्थे । त्यहीकारण उनको नाम प्रनद पड राखिएको थियो ।
सुदर्शन चक्र : भगवान विष्णुको हातमा सदैव सुदर्शन चक्र सुशोभित रहन्छ । यो सुदर्शन चक्र भगवान शिवले नै भगवान विष्णुलाई दिएका थिए । एक पटक भगवान विष्णु शिवजीको आराधना गरिरहेका थिए । विष्णु देवताले भोलेनाथलाई प्रसन्न गर्नका लागि हजारौँ कमल ओछ्याएका थिए ।
अमरनाथ गुफाको कथा : भगवान शिवका भक्तका लागि अमरनाथ गुफा धेरै महत्वपूर्ण छ । जब माता पार्वतीले भगवान शिवसँग अमरत्वको रहस्य बताउन भनिन् तब उनी गुफाबाट बाहिर निस्किए । गुफा जाने बाटोमा उनले कयौँ काम गरे । यही कारण गुफा जाने बाटोलाई पुरा चमत्कारिक मानिन्छ । अमरकथाको रहस्य बताउने क्रममा भगवानले आफ्ना पुत्र, वाहन आदिलाई निर्जन स्थानमा छाडिदिए । यी सबै स्थान तीर्थस्थल बने । पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव गुफासम्म हाल जम्मु कश्मीर रहेको पहलगाम हुँदै पुगेका थिए । (gnewsnepal बाट सभार)
विपक्षी गठबन्धनले संसद् विघटन विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी !!
विघटनविरुद्ध संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठक, १४९ सांसदहरू नै सर्वोच्च जाने तयारी !!